ဂျကာတာမြို့ မြန်မာသံရုံးရှေ့မှာ မူဆလင် အဖွဲ့ဝင်တွေ ဆန္ဒပြ
ဂျကာတာမြို့ မြန်မာသံရုံးရှေ့မှာ မူဆလင် အဖွဲ့ဝင်တွေ ဆန္ဒပြ မနေ့က အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ၊ ဂျကာတာမြို့က မြန်မာသံရုံးရှေ့မှာ သဘောထား တင်းမာသူ မူဆလင် အဖွဲ့ဝင်တွေက ဘင်္ဂါလီ ရိုဟင်ဂျာ ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်။
အစ္စလာမ် ကာကွယ်ရေးတပ်ဦး (FPT) နဲ့ (JAT) စတဲ့ အဖွဲ့တွေက လူ (၃၀၀) လောက်က မြန်မာနိုင်ငံမှာ ရိုဟင်ဂျာ မူဆလင်တွေအပေါ် လူမျိုးတုံး သတ်ဖြတ်နေတဲ့ကိစ္စ ရပ်ဆိုင်းရေးဆိုပြီး ဆန္ဒပြကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဆန္ဒပြ ခေါင်းဆောင်တစ်ယောက်က မြန်မာ သံရုံးအရာရှိတွေနဲ့ တွေ့ဆုံလိုကြောင်း အသံချဲ့စက်ကတဆင့် ခြိမ်းခြောက် တောင်းဆိုခဲ့ကြောင်း အေအက်ပီ သတင်းက ဖော်ပြပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ ဆန္ဒပြသူတွေဟာ လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ (၅၀) လောက် စောင့်ကြပ်ပေးနေတဲ့ မြန်မာသံရုံးထဲကို ၀င်ရောက်ဖို့ မကြိုးစားဘဲ ကုလသမဂ္ဂ ရုံးတစ်ရုံးဆီကို ဆန္ဒပြဖို့ ထွက်ခွာသွားခဲ့ကြတယ်လို့ သိရပါတယ်။
ဒီအတွင်း အာရပ်စော်ဘွားများနိုင်ငံ (UAE) နိုင်ငံခြားရေး ၀န်ကြီးက မြန်မာနိုင်ငံမှာ အစ္စလာမ် ဘာသာဝင်တွေ ဖိနှိပ်ခံနေတဲ့ကိစ္စ ရပ်ဆိုင်းရေးအတွက် အရေးပေါ် အစည်းအဝေး ခေါ်ယူပေးဖို့ ကုလသမဂ္ဂ လူ့အခွင့်အရေး ကောင်စီကို မနေ့က တိုက်တွန်းလိုက်ကြောင်း KUNA ကူဝိတ် သတင်းဌာနက ဖော်ပြပါတယ်။
ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးများ အင်ဒိုနီးရှားနှင့်ဖိလစ်ပိုင် ငြိမ်းချမ်းရေး ပညာရှင်များနှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေး ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ရွေးချယ်မှု ကန့်ကွက်ဆန္ဒပြဖို့ စာတင်
ရန်ကုန် မှာ ကားဗုံးပေါက်တာတို့။ သေနတ် သမား တွေ ဝင် ပစ် တာ တို့ မဖြစ် အောင် မြန်မာ ပြည် သူတွေ မွတ်စလင်မ် တွေ ကို နှိပ် ကွတ် တာ တွေ ဆက်လက် မလုပ် ဘို့ လိုနေပြီ။
မြန်မာပြည်မှာနေပြီး မြန်မာတွေ ပျက်စီးဖို့ကြံနေတာ ခင်ဗျားတို့လဲသိမှာပါ
သူတို့နုင်ငံတွေမှာခြားဘာသာဝင်တွေကို ဘယ်လိုနှိပ်ကွပ်တယ်ဆိုတာ သွားဖူးတဲ့သူတွေ အသိဆုံးပါ
Jul 21, 2012 11:32 PM
Why don't you mention that they call Jihad on Burma? Why don't you twist the news? Shame on you. Jul 16, 2012 02:53 PM
You all talk only about Rohingyas in Burma - but not one of you say anything about the Rakhines living in Bangladesh . There are hundred of thousands of Rakhines living in Bangladesh . These Rakhines are treated much better by the Bangladesh Government than the Rohingyas treated by Burma . These Rakhines are not of Bangladesh origin but the Bangladesh Government gave them the National Identity cards . Do you think the Bangladesh Government should kick all these Rakhines out of their country .
Jul 16, 2012 03:29 AM